रोजगारी – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > रोजगारी
Tag Archives: रोजगारी
क्लाउड पत्रिकासाउन २१, २०७८
काठमाडौं, २१ साउन । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका नेपालीलाई प्रवेश खुला गरेको छ । यूएईले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी प्रवेश खुला गरेको आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । त्यस्तै यूएईको भिसा भएका तर खोप नलगाएका व्यक्तिलाई ४८ घण्टाको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । यूएईको सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्ति, युएइमा…
क्लाउड पत्रिकासाउन १९, २०७८
काठमाडौं, १९ साउन । न्याय सेवा आयोगले १८ जना न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। न्याय सेवा परीक्षा महाशाखाले मंगलबार एक सूचना निकाल्दै आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्न १८ जनाको लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी थप…
गाउँमा काम नपाउँदा काम खोज्न भारत जाने सुदूरपश्चिमेलीको लर्को
बिकास न्युजसाउन १७, २०७८
डाेटी । कोरोना भाइसको जोखिम कायमै रहेका बेला त्यसको बेवास्ता गर्दै सयौँ सुदूरपश्चिमेली काम खोज्नका लागि दिनहुँ भारत पस्न थालेका छन् । यहाँका गाउँघरमा खेतीपातीको काम सकिएपछि गाउँमा रोजगारी नपाउँदा यहाँका वृद्ध, महिला, बालबालिका तथा युवा काम खोज्नकै लागि भारतका विभिन्न शहर जाने क्रम निकै बढेको छ । कैलालीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिनगरका अनुसार…
विश्वका ठूला कम्पनीमा कति छन् कामदार ? अमेजनमा मात्रै १३ लाख
क्लाउड पत्रिकासाउन १५, २०७८
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध केही कम्पनी कमाईको रुपमा मात्रै नभएर धेरै रोजगारी सिर्जनामा निकै अघि रहेका छन् । जसमा लाखौ मानिसले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाईरहेका छन् । चर्चित कम्पनी अमेजन, माइक्रोसफ्ट, एप्पल र टेस्लामा मात्रै लाखौ मानिसले रोजगारी पाईरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी प्रदान गर्ने कम्पनी अमेजन अगाडी छन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम ‘ग्रिक…
श्रमिकको ज्याला ५ प्रतिशतले वृद्धि, अब कुन काम गर्नेले कति पाउँछन् ?
चाणक्य पोष्टसाउन १२, २०७८
श्रमिकको ज्याला ५ प्रतिशतले वृद्धि, अब कुन काम गर्नेले कति पाउँछन् ? चाणक्य पोष्ट प्रकाशित : 2:27 pm, मंगलबार, साउन १२, २०७८ काठमाडौं । श्रमिकको ज्यालादरमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरोकार निकायको समन्वयमा आव २०७८/७९ का लागि यसअघि कायम भएको दरमा ५ प्रतिशत बढाएर मजदूरको ज्याला निर्धारण गरेको हो…
इजरायलमा १००० नेपालीलाई रोजगारी खुल्यो, मासिक तलब झन्डै २ लाख, यसरी दिनुस् आवेदन
इजरायलमा १००० नेपालीलाई रोजगारी खुल्यो, मासिक तलब झन्डै २ लाख, यसरी दिनुस् आवेदन चाणक्य पोष्ट प्रकाशित : 1:49 pm, मंगलबार, साउन १२, २०७८ काठमाडौं । लामो समयको तयारीपछि नेपाली श्रमिकले इजरायलमा रोजगारी पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले आज सूचना जारी गर्दै औपचारिक रुपमा इजरायल रोजगारीका लागि खुला भएको जनाएको हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कामदार…
इजरायलमा एक हजार नेपाली श्रमिक माग, क-कसले पाउँछन् जान ? (विज्ञापनसहित)
क्लाउड पत्रिकासाउन १२, २०७८
काठमाडौं, १२ साउन । इजरायलले एक हजार नेपाली श्रमिक माग गरेको छ । इजरायलले माग गरे बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले एक हजार जना श्रमिकका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । सरकारले गतवर्ष इजरायल र नेपालबीच श्रम सम्झौता गर्दै पहिलो चरणमा ५ सय जना कामदार पठाउने समझदारी गरेको थियो । जस अनुरुपनै कामदार मागेको हो ।…
बिकास न्युजअसार २३, २०७८
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले आवद्धताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ताकेता गरिरहेको छ । कोषको ताकेतापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएमा आफूहरुले खाइपाई आएको सुविधा कटौति हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाई छ । आफूहरुलाई कम सेवा सुविधा हुने कोषमा ल्याउनको लागि कानूनी…
क्लाउड पत्रिकाअसार १९, २०७८
काठमाडौं, १९ असार । बतास एग्रो बहुउद्देश्यीय कृषी परियोजनाले किसानको लागि आकर्षक प्याकेजसहित रोजगारी खुलाएको छ । एक सूचना जारी गर्दै जातीय समावेशीकरणको आधारमा १० किसान परिवारको लागि रोजगारी खुलाएको हो । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका भयर चौर वडा नं. २ मा रहेको कृषि उद्यममा गन्धर्व, विश्वकर्मा, दर्जी, सार्की, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवार परिवारका लागि…